Izibhengezo ezenziweyo ebusika: iziqhamo ezitshiweyo
Indlu yasekhaya Recipes
I-compote yasekhaya ayikwazi ukuthelekiswa nawuphi na omnye. Ngethuba lethu ukwenza amalungiselelo okuzenzela ubusika - i-compotes, inenzuzo!
■ 4 kg yeebhilikri
■ 400-500 g iswekile
■ ilitha 1 yamanzi
Hlanganisa ama-apricot. Sika ii-ezinkulu zibe ngama-halves, shiya amancinci angene. Hlela ama-apricots kwiimbiza. Ubilise amanzi, yongeza iswekile uze udibanise uze udibaniswe ngokupheleleyo. Thela isiraphu phezu kwezimbiza zama-apricot, shiya u-5-7 imizuzu, uze uthele isiraphu kwisipuphu, uyibuyisele emathunjini. Okwesibini, gcwalisa ama-apricot nge isiraphu, uyixube, uyijike kwaye uyishiye ide ipholile ngokupheleleyo.
■ Amajikijolo aseLwandle-buckthorn
■ i-500 g iswekile
Geza amajikijolo ahlanziweyo kwiimbiza ezilungiselelwe, uzalise nge-1/3 (ungagcwalisa amathini kunye ngokupheleleyo xa ungenayo indawo yokugcina eyaneleyo, kwaye ufuna ukuwenza i-compote igxininise, ize ihluthe). Thela amajikijolo ngesiraphu eshushu, khusela, jikela phezulu kwaye ushiye ukuze ucolile ngokupheleleyo. Unokupheka i-sea-buckthorn compote, ukucoca i juice kumajikijolo kwaye udibanise nesiraphu ishukela. Ungaphinda ungeze ii-apula kunye nama-rosehips kwi-buckthorn yolwandle.
1 kg i-strawberries
250 g iswekile
Amajikijolo alungiselelwe kwipuphu yomphunga we-eamel kwaye uthele iswekile. Emva kwama-2-3 iiyure, xa amajikijolo aya kunika i juice, ayifake kwiimbiza kunye nejusi aze athululele amanzi abilayo. Amajikijolo alungiselelwe ukulungiselela izimbiza, uzalise i-1/3, uthele isiraphu ebilayo kwi-1 ilitha yamanzi 1-1,2 kg iswekile. I-Clot kwaye uguqulele isiqhekeza.
■ 1.2 kg iswekile
■ 1.5 tsp. acid citric
Ukupheka isiraphu iswekile. Kwisiraphu ebilisayo kwiingxenye, nciphisa amajikijolo ahlanziweyo anomileyo, upheke amaminithi amane, uze uthumele amajikijolo ukuya kwiimbiza. Xa zonke iibriji ziphekwe, yongeza i-citric acid kwisiraphu, susa i-foam uze ugcwalise amajikijolo kwiimbiza. Vala.
Amanzi lingonberry - compote
I-Cranberry iyithathe, yifake kwijeli yeglasi, uyizalise ngamanzi asemswakabileni amanzi okanye amanzi asemgangathweni, uyishiye endaweni epholileyo. Unako ukusela amanzi ase-lingonberry, kwaye usebenzise amajikijolo ukuze ulunge. I-crranberries enomnandi inokukhatyiswa ngobusi. Emva kweenyanga ezi-1-2, gcoba ingilazi yamanzi e-redfish, nciphisa ubusi kuyo ukuze uyinambitha uze uyibuyisele kwisitya.
Sterilize okanye akunjalo?
Kuzo zonke iincwadi zecilinary kubhaliwe ngokungabonakaliyo: ukutyhila. Xa inzalo, kwiqondo lokushisa lika-100 ° C, i-microflora iyabulawa ngokupheleleyo, ngoko ke izakhiwo zingagcinwa ixesha elide. Enyanisweni, le ndlela yokulondoloza ineentsilelo zayo: kumaqondo aphezulu aphezulu, ii-vithamini ziyachithwa. Kodwa kwezinye iimeko, oko kukuthi, xa ulungiselela ama-compotes, ngaphandle kobuncwane kwezinye iimeko ungazenza ngaphandle:
ukuba iimveliso zenzelwe ukugcinwa kwexesha elifutshane;
ukuba isiqhamo esineziqhamo sinexabiso elaneleyo le-asidi. I-acid ephezulu iphazamise ukuphuhliswa kwee-microbes. Ngoko ke, iziqhamo ezinomuncu kunye namajikijolo (i-cranberries, i-ash ash, i-cranberries, i-currants, i-gooseberries, ii-apula ezinobuninzi, i-cherries, njl njl njl) zinokugcinwa ngaphandle kokwesaba.
• Iziqhamo ezingcolileyo zimele zihlanjwe iiyure eziliqela kwisisombululo sesoda (5-6 g ye-soda nge 1 litre yamanzi).
• Iikhemikhali ezisetyenziselwa ukulawula iintsholongwane zingasuswa ngokuhlamba iziqhamo ngamanzi ngeviniga.
• Ngaphambi kokunqanda, iziqhamo kufuneka zihlanjululwe ngokucophelela, zisuse i-unripe, overripe and damaged.
• Ukugcina ijusi. Ezinye izithelo ezivuthiweyo okanye iziqhamo zincinci kakhulu kumgca. Ungayifaka ijusi kubo, ubilise ngeshukela kunye nebhokisi.
I-Sugar yindoda ekhuselekileyo. Yenza iqoqo lakho le-jam-jam-confitures. Jabulela amaqabunga ehlobo lonke unyaka!
Ixesha lama-strawberries ehlathi lifutshane - nje ngeeveki ezimbalwa ngoJuni. Kodwa i-strawberries yase-garden ye-remontant isithelo kuze kube yindla. Ukuqokelela amajikijolo kwiindwendwe ezininzi (ukuqokelelwa kusitolo kwangaphambili ukuya kupheka kwifriji) upheke umqubu ococekileyo.
■ 1 kg i-strawberry
■ 1.3 kg iswekile
■ 2 g ye-citric acid
Amajikijolo alungisiweyo atyelela iswekile epenini yokupheka kwaye ushiye kwindawo yokushisa yecala kuze kubekho ukubonakala kwejusi. Beka isigodlo emlilweni omncinci, ukufudumala, ukuvuselela ngobumnene, ukuze yonke ishukela ichithe. Pheka ama-strawberries ngokufudumala phakathi kwemizuzu engama-15-20, ukukhupha i-foam ngezikhathi ezithile. Ekupheleni kokupheka, yongeza i-citric acid.
I-Cranberry jam kunye nobusi
■ 1 kg ye-cranberry
■ 1.6 kg yobusi
■ 0,5-0,6 l amanzi
Ukusuka kubusi kunye namanzi, lungisa isiraphu. I-cranberries ye-Berry i-3-4 imizuzu efakwe ngamanzi abilayo, uze uhlale kwaye uguqulele kwisiraphu ebilisayo. Pheka phezu kweqondo elide uze upheke ngasinye.
I-Apple jam ne-sinamoni
■ i-1 kg yeepile zama-autumn izinhlobo (ukuhlamba, i-peel kunye nembewu)
■ 1 kg iswekile
■ 1 tsp. i sinamoni
Jonga ii-apula zibe ziinqununu, zibeke kwisisombululo soda esilula ukuze zingabi mnyama. Lungisa isiraphu: 1 ingilazi yamanzi ne-1 kg iswekile izisa kubilisa. Thela iipulo nge-syrup eshushu, yifake umlilo, yizise kwimilenze uze upheke imizuzu eyi-10-15. Imizuzu emi-5 ngaphambi kokuphela kokupheka, faka i-cinnamon. Ukusabalalisa i-jam kwiimbiza ezinamanzi, zivale. Esikhundleni se-sinamoni, unokongeza i-peel legranti okanye i-orange-jam izakufumana ukunambitheka kwe-citrus. Ukuba ufuna iipulo zibilise ngokugqithiseleyo kwaye i-jam iyaba yinto ehambelana nayo, zigcine zihlala zide ngomlilo.
Kukho iindlela ezininzi zokulondoloza ushukela. Khetha enye efana nayo okanye ibonakala ibulula.
Izithelo ziphekwe kwisiraphu yeswekile. Ngokupheka okulungileyo, iziqhamo kunye namajikijolo akalahlekelwa yimilo, ngokugqithiseleyo zifakwe kwisiraphu.
Ukulungiselela iziqhamo, isiqhamo siphuculelwe kwi-puree, ke sipheka. I-Sugar yongezwa ekupheleni, umthamo we-jam iyisiqingatha somthamo we-original puree.
Ngokungafani ne-jam, isiraphu kwi-jam ayihluki kwizityalo, ezinokutshintsha, okubilisiwe. Ukuze ulungise i-jam, iziqhamo zipheka kuqala ngaphandle kweshukela, kwaye emva koko.
Le yintlobo ye-jam-jelly, apho izithelo okanye amajikijolo ahanjiswa ngokufanayo. Ngokuza kweemveliso zepectic, isidingo sokulungiselela iigiskiti kunye noshukela oluninzi sinyamalale. Brew kuze kube sekulungele - oku kungakanani? Qinisekisa ukulungeleka kwe-jam akulona nzima: gcoba i-spoonful isiraphu kwisitya esibandayo. Ukuba ayifaki (okanye isasazeka ngokukhawuleza), i-jam ikulungele. I-jam ephucukileyo kakuhle, isithelo esikuyo asibilisiwe, sihluke kalula kwisiraphu.
Isitayela sobukhosi saseGooseberry
I-Gooseberries ngaphandle kwemibhobho - i-delimacy jam! Amajikijolo amakhulu agcwele isiraphu ye-amber ... Yiphula! Khetha le jam iindidi ezinkulu ze-gooseberries.
■ 1 kg ye-gooseberry
■ 1.4 kg iswekile
■ i-100 g yamagqabi e-cherry
■ iikomityi ezintathu zamanzi
Amaqabunga e Cherry ahlambuluke kakuhle, athulule amanzi abandayo, ufike kwi-thumba uze unqande umhluzi. Ngamajikijolo alungiselelwe ama-gooseberries anqumla "iibhondi" okanye enze umgca omde ovela kwicala, sebenzisa isibambo sesipuni ukususa imbewu. Thela amajikijolo kunye ne-decoction yamacembe e-cherry, ushiye ubusuku bonke. Ukucoca amanzi kwijebe ukwenza i-jam, yongeza ushukela kwaye upheke isiraphu. Beka amajikijolo kwisiraphu eshisayo, yizise ekubiliseni ngokushisa okuphantsi kwaye upheke imizuzu eyi-10-15, ususe i-foam. Ukupholisa ngokupheleleyo i-jam kwaye uphinde uphinde upheke. Imizuzu engama-2-3 ngaphambi kokuphela, engeza amaqabunga ama-cherry. Dlulisa i-jam ebushushu kwimitshini uze uyixube.
■ 1 kg ye-cherry yellow
■ i-lemon peel
Ukuhlamba i Cherries, ukususa amathambo. Lungisa isiraphu, udibanise 1 iglasi yamanzi kunye noshukela, ulethe isiraphu kwindawo yokubilisa, ukuze ishukela ichithe ngokupheleleyo. Faka kwisiraphu ebilisayo e-cherry edibeneyo, ususe ekushiseni kwaye ushiye kude ucolile ngokupheleleyo. Emva koko misela kubilisa ngokushisa okuphantsi, upheke imizuzu eyi-10. Phinda kwakhona. Phinda uphinde uphuze, udibanise i-lemon peel. Pheka uze wenze. I-jam ehambayo isasazeka kwiimbiza kunye nengqayi. Kukulungele ukususa amathambo ngesistim esikhethekileyo sokunyuka kwamathambo.
I-recipe ye-apple pie
Lungisa isaladi yamaGrike. Ukupheka kunye neNcomelo
Iindlela zokupheka ezithandwa kakhulu
Iresiphi engavamile kwaye elula: isinkwa sebhanana kunye necocoa
Ukubhenela umboniso okanye ukupheka i-squid kwi-batter
Iidlela zokulungiselela izitya zentsasa
Izinketho ezininzi ze-saladi kunye neziqhamo
Iivithamini zasehlobo zivela kwiziqhamo zabafazi abakhulelweyo
Ngaba ucansi lomlomo luyingozi?
Ukuqaliswa kokutya okuncedisayo kubantwana abaneminyaka engaphantsi kweminyaka
Iilwimi zesiNgesi kunye nama-nut kunye ne-caramel
Ukuba umyeni usebenza ngaso sonke ixesha, oko kuthetha ntoni?
I-Macaroni-nests i-sauce yamakhowe
Abadlali abadumileyo aba-7 abafa ngexesha lokudlala
Intombazana ekwiqela lamadoda
USergei Lazarev waphazamisa kwisigaba se-Petersburg BKZ, ividiyo
Izindlela ezibalulekileyo zempilo yomzimba
I-jelly eyakhelwe ngaphakathi kwi-quince
Ukupheka: Izidlo zokutya Ukupheka
I-Menorrhagia: izizathu, iimpawu, unyango
Ngubani ongafuni abantu
Umculo ngumxhammone onomdla
Amadoda afanele agwenywe
5 iinkolelo malunga nobuhle